Ukuwa ngu-Eminem - Izinto Zobugcisa
Kwi 'Fall,' u-Eminem ugxeka iqela leerappers zangoku azithatha njenge-wack, esithi 'bafumana isitayile esivela eMigos, emva koko bakopa uDrake.' Nangona kunjalo, nguJoe Budden obangela ingqumbo kaSlim Shady.
Umntu othile uxelela uBudden ngaphambi kokuba ndiqhawule, kungcono ayikhawuleze
Okanye umthwalo wakhe womzimba uziphuwe
Isignee Signee sabuza i-albhamu yangaphambili ye-Detroit Imvuselelo Ngexesha lesiqendu se Umzabalazo Wemihla ngemihla , esithi “yenye yezona rekhodi zakha zabuhlungu.” Ngaphandle kwayo yonke le nto, ngexesha lika Kamikaze Ukukhutshwa, u-Burl usayinwe kwi Shady Record.
Umkhondo ubonakalisa ezinye izandi ze-falsetto ezivela kuYon Iver kaJustin Vernon. Nangona le yintsebenziswano yakhe yokuqala kunye no-Eminem usebenze nabanye abavakalisi ngaphambili, ngokukodwa kwi-Kanye West ' Isigebenga . '
UTyler, uMdali uxhokonxa isicengcelezo esiphikisayo Kamikaze , xa uEminem esebenzisa kule ngoma i-slur homophobic ngokunxulumene nomqambi we-Odd Future. I-diss iza njengesiphumo sokugxekwa nguTyler Imvuselelo 'Khokela umntu ongatshatanga' Ukuhamba emanzini, 'tweeting:' Thixo othandekayo le sheesh yoyikekayo. '
UTyler uchaze ukuthanda kwakhe ngokwesondo izihlandlo ezininzi ngemizobo, iitweets kunye namazwi. Ukuqhawulwa kobufanasini akuyona into entsha ku-Eminem - ikhathalogu yakhe yangasemva egcwele izithuko kunye nezithuko.
Ukuthetha nephephandaba lase-UK UMgcini Nge-Okthobha i-5, i-2019, uTyler wazikhwaza kwi-diss.
Ndiyazi ukuba yintoni injongo. Waziva enyanzelekile kuba abantu babecaphuka ngenxa yam. Musa ukucaphuka ngenxa yam. Besidlala bazebelayo abazenzekela ngokwabo abalungile sakuva oko. Siyiphindile kwaye safana: 'Owu, [shrug].' Kwaye saqhubeka nokudlala. '
UVernon wasika ilizwi lakhe ngokwahlukeneyo kunye nomvelisi uMike Will Made It kwaye wayengekho kwisitudiyo xa uEminem erekhoda isingqisho sakhe. Kubonakala ukuba wayedanile xa esiva into awayeze ngayo uDetroit MC. 'Ayingowomntu othanda umyalezo' umphathi-phambili weBon Iver wathumela umyalezo nge-tweet ephendula kumlandeli wakhe. Idiniwe. Bacele ukuba batshintshe ingoma, kodwa abayenzi loo nto. '
Enye i-tweet ilandelwe, apho uVernon wathi 'uza kubulala lo mzila.' Oku kubonakala ngathi kukhuthaze isenzo esithile njengoko u-'em - ot 'slur Eminem osetyenziswe ngokuchasene noTyler uMdali kwithrekhi yokuqala yahlelwa kwiinkonzo zokusasaza nakwividiyo yengoma.
Ividiyo icwangciswe njengefilimu emanyumnyezi eyoyikisayo. Iqala ngo-Eminem ekhwele emotweni noRoyce Da 5'9 'efunda iintloko ezibi kwifowuni yakhe Imvuselelo icwecwe. Umfanekiso onesiporho uvela kwi-iPad yakhe kwaye uyambamba umrepha, umlandele ngeenxa zonke kwaye ekugqibeleni ubenaye. Iiklip ziphela ngaye etyumza a Imvuselelo Ityala le-CD ngonyawo lwakhe.
U-Eminem uvumile kudliwanondlebe noSway Calloway ukuba waya kude kakhulu xa ethuka uTyler uMdali. 'Ndandinomsindo xa ndasitsho malunga noTyler, utshilo. Ndicinga ukuba igama endimbize ngalo kuloo ngoma yenye yezinto apho ndaziva ngathi oku kunokuba kude kakhulu. Kungenxa yokuba kumnqweno wam wokumenza buhlungu, ndiyaqonda ukuba ndandikhathaza abanye abantu ngokuthetha oko. '
randy newman unaye umhlobo kum ezinye izinto ezirekhodiweyo zale ngoma
1212 intsingiselo yamawele omlilo
imipu n roses umntwana oswiti o wam
Ndingayenza nantoni na ngothando lwenyama